လမင်းခင်: September 2009
၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း တို့ အား အစိုးရ အဖွဲ့ တွင်းမှ ထုတ် ပစ် မည်ဟု
ဖိနပ်စာမိ၍ နာမ်နှိမ်သွားသည့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း တို့ အား အစိုးရ အဖွဲ့ တွင်းမှ ထုတ် ပစ် မည်ဟုနေပြည်တော် အစိုးရ ၀န်ကြီးများ သတင်းရပ်
ကွက် တွင် သတင်းထွက် ပေါ်နေသည်။
ယမန်နေ့ က နယူးယောက်ရှိ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံ သို့ တက်ရောက်ရန် တည်းခိုရာ ဟိုတယ်
မှ အထွက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများ၏ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက် ခြင်းအပြင် ဖိနပ်ဖြစ်ပစ်ပေါက်
၍ ရှုံချခံရသည့် နအဖ စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ မှ ၀န်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို နေပြည်တော် သို့ 
ပြန်ရောက်ပါ က ရာထူးမှ ဖယ်ရှားပစ် မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
စနေနံ ဖိနပ် ထိခြင်းသည် မြန်မာ မှု ဓလေ့ ထုံးစံအရ ကံ နှင့် နာမ် အလွန်ပင် နိမ့်ကျကြောင်း နေပြည်
တော် မှ ညွှန်ကြားရေးမှုး တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာနည်းအရ နာမ်နှိမ် သွားသည့် သူများကို အစိုးရ အဖွဲ့ အတွင်းထားပါ က အစိုးရ
အဖွဲ့ အတွင်းအကွဲ အပြဲများဖြစ်ပြီး ပြုတ်ကျနိုင်သည် ဟု အင်္ဂ၀ဇ္ဇာ နှင့် ဗေဒင် တတ်ကြွမ်းသူများ ၏
သုံးသပ် ချက်များ လည်း ယနေ့ နေပြည်တော် တွင် ပေါ်ထွက် နေသည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် စုံစမ်းရရှိသော သတင်းတစ်ရပ် အရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် နှင့် နိုင်ငံခြား
ရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အား အပြန်တွင် နေပြည်တော် သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့် မပြုပဲ ရန်ကုန် တွင်
တစ်ထောက်နားပြီး ဟူးရာ ဗေဒင် ဆရာများ ဖြင့် ကံပွင့် အောင် စီမံ ဆောင် ရွက်ပြီးမှ နေပြည်တော်
သို့ ဝင်ရောက် ခွင့် ပြုမည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ သမိုင်းတွင် လည်း ဆူဟာတို ၊ ကျန်ဇီမင်း ၊ပီနိုရှေး စသည့် အာဏာရှင်များမှာ ဖိနပ်ဖြင့် ပစ်
အမေရိကန် သမ္မတ ဟောင်း ဂျော့ရ်ှဘုရ်ှသည် ဒုတိယ သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရန် လပိုင်း အလို
တွင် အီရတ် နိုင်ငံ၌ ဖိနပ် ဖြင့် အပေါက်ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်း အားဖိနပ် ထိမှန်ပြီး ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပင်
အမေရိကန် စီးပွားရေးပျက်ကပ် စသည်။
Posted by LRDP at 4:09 PM0comments Links to this post
စစ်ရာဇ၀တ်ကောင် သိန်းစိန်နှင့် ညဏ်ဝင်းအား အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ဘိနပ်ဖြင့် ပေါက်၍ ဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြ၊
နယူးယောက် မှာ စစ်အုပ်စု ကို ဖိနပ် နဲ့ ပေါက် ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်
ရဲဘော်များ ဒီလင့်လေး ကို ကလစ် လိုက်ပါ နယူးယောက် ဟော်တယ် တစ်ခု ရှေ့မှာ ခွေးပြေးဝက်ပြေး
ပြေးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ စစ်ကောင်စီဝင် ဥဏ်ဝင်း ပုန်းပြေး ပြေး ခဲ့တာ တွေ့ ရပါလိမ့် မယ် အမေရိကန်ရောက်
မြန်မာဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှား ခဲ့သူတွေ ရဲ့ နာကျဉ်းချက် နဲ့တုန့် ပြန်ချက် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
Posted by LRDP at 11:06 PM0comments Links to this post
ဟင့်အင်း ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ရွှေတံတားခင်းပေးနေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်
Posted by LRDP at 6:44 PM0comments Links to this post
နယူးယောက်မြို့ က မြန်မာ များ သိန်းစိန်နဲ့ ညဏ်ဝင်းကိုဖိနပ်စာကြွေးလိုက်ပါတယ်။ ညဏ်ဝင်းအရှင်မိ၊ သိန်းစိန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်။ ကားလမ်း ကို ပြောင်းပြန်မောင်းပြေး။
Posted by LRDP at 6:13 PM0comments Links to this post
အစိုးရနှင့်အတိုက်အခံ နှစ်ဖက်စလုံးကို တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း
၎င်းက “သူတို့ပြောတာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝါဒရဲ့ ရှေ့ပြေးပေါ့ဗျာ။ ပါတဲ့အချက်တွေကတော့ sanction ကတော့ ဆက်ရှိနေမယ်ပေါ့။ တဖက်ကလည်း တပ်မတော်အစိုးရနဲ့ engagement ပေါ့၊ ပိုမိုနီးကပ်တဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကို
လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဆန်ရှင်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖျက်သိမ်းသွားမယ့်ဟာမျိုးကိုလည်း သူတို့ သဘောထားရှိတဲ့ သဘောပေါ့လေ။ ဒါဟာလည်း တဖက်က အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဖမ်းထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ ပျော့ပျောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ ပြသလာမယ်၊ ဆက်ဆံမှုတွေမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောထားတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဘက်က တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
Posted by LRDP at 7:11 AM2comments Links to this post
ဒီ ပိုက်ဆံ ၅၀၀၀ ကျပ် ကတော့ စစ်အုပ်စု အောက်တိုဘာလ(၁) ရက် နေ့ မှာ စတင် အသုံးပြုမဲ့ ၅၀၀၀ ကျပ် ငွေစက္ကူသစ်
ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကနေ့န အ ဖ ပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ပြသ ပြီးကြေညာသွားတာပါ ကြေညာ တဲ့ နေရာမှာလည်းပြည်သူ
ကို ဘယ်လောက်ကြောက်နေလဲ ဆို တာ ထင်ရှားပါတယ် နဂိုသုံးစွဲ နေတဲ့ ငွေစက္ကူတွေ ကို ဆက်လက် သုံးဆွဲ ခွင့် ပြုမှာပါလို့ 
ပါ ထည့်သွင်းကြေညာသွားတာ ကျမ နားထောင်ရင်း ပြုံးမိပါတယ် ။ ငွေစက္ကူတွေ မတရားသိမ်း ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၇ ကို ပြန်တွေးမိလို့ 
ပါ။ အင်း ပြည်သူလူထု ကတော့ ငွေရှာရခက် တဲ့ကြား က ငါးထောင်တန် တွေ ကိုင်ရဦးမယ် ဆိုတော့ လခ ထုတ်ရင် တစ်ရွက်
တည်း အိမ်အပြန်သယ်ဆောင်ရတာတွေ ဖြစ်ဦးမှာပါလား လို့ တွေးရင်း ပြည်သူအတွက် အာမခံ မှုရှိတဲ့ ငွေကြေးစနစ် ကိုရှိဖို့ မ
ကြိုးစားပဲ စက္ကူတွေ ထင်တိုင်း လှိမ့် ထုတ်နေသ၍ ကုန်ဈေးနှုန်း တွေ လည်း အဆမတန် တက်ဦးမှာပါပဲ ။
Posted by LRDP at 7:45 AM4comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:14 PM0comments Links to this post
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဒီကနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းမှုမ၇ှိပဲ မတရားမှုတွေ ကြီးစိုးတာခံ နေရတဲ့မြန်မာ
ပြည်သူတွေအတွက် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှာငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျောက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုင်းလူ့ အခွင့်
အရေးဆောင်ရွက်သူတွေပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာကနေ မြန်မာအရေးလာဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥရောပသားတွေ
အမေရိက က ပုဂိုလ်တွေပါတယ် မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ ရဲ့ ဦးဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ကိုလည်းတွေ့ ရတယ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ချို့နဲ့လူမှုရေးသင်းပင်းတွေက မြန်မာ့ လူ့ အခွင့်အရေးတက်ကြွသူတွေနဲ့ 
အတူဦးဆောင်သူတွေကတော့ စက်တင်ဘာသံဃာတော်တွေပေါ့ ။ ကျမ ဘေးကနေလိုက်ဝန်းရံခဲ့ပေမဲ့မျက်
ရည်ဝဲမိပါတယ်။စက်တင်ဘာသံဃာ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်ယောင်မိစေမဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့မေတ္တာပို့ သံ
မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်သံတွေကြောင့်ပေါ့။လမ်းလျောက်သူတွေရဲ့ဇွဲ ကိုလေးစားမိပါတယ်သူတို့ ယုံကြည်ချက်
က ပူလောင်တဲ့နေ ရောင်အောက်မှာပိုလို့ မြင်သာစေခဲ့တယ်။ အမိမြန်မာပြည်အတွက်ဒီလိုရဲရဲတောက် တွေ
တွေ့ ရတယ် တကယ်ကို ကြည်နူးကြေနပ်စရာပါ ။သံဃာတော် တွေရဲ့ကျေးဇူးကကြီးလှပါတယ် ငြိမ်းချမ်းရေး
နေ့ မှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တရားအားမထုတ်နိုင်ပဲ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ပြည့်သူ့ ကိုယ်စားဆန္ဒ
တွေဖေါ်ထုတ်ပြနေရတယ် လေ ။အင်အား ၂၀၀ကျော်တဲ့ လမ်းလျောက်သူတွေရဲ့ နောက်မှာဘေးမှာ ထိုင်း
ထောက်လှမ်းရေးတွေ ၀န်းရံနေပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖိအားပေး ခြင်းတားမြစ်ခြင်း မရှိတာကြောင့် ဒီမိုကရေစီ
တစ်ဝက်တစ်ပျက် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဒီလောက် တန်ဖိုးထားနေတာကြည့်ရင် စစ်အုပ်စုအ
နေနဲ့ရှက်တက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လူတိုင်း လူသားတိုင်း လိုချင်ကြတယ် တန်ဖိုးထားကြတယ်
ဆိုတာနားလည်ရင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဟန့် တားနေတဲ့ စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များ က လူဆန်ဖို့ ပြုပြင်သင့်ကြပါ
တယ် ဆိုတာ ညွှန်ပြရင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။။။
Posted by LRDP at 7:28 AM0comments Links to this post
39. Michael Win Kyaw (Kale prison) – 88 Generation Students member; former political prisoner 40. Min Min (a) La Min Tun, (Hinzada prison) , Human Rights Defenders and Promoters
47. Myint Oo (a) Ni Ni (Mandalay prison) – NLD Township organizer; former political prisoner 48. Myint Oo (Thayet prison) – NLD Township Joint Secretary
Posted by LRDP at 8:45 AM0comments Links to this post
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က သေနတ်မှန်ထားသော ကျောင်းသူလေးကို သယ်ယူပြေးလွှားနေသည့် ဒေါက်တာ စောလွင်နှင့် ဒေါက်တာ မင်းသိန်းကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့လူငယ်များစွာဟာလည်း ကြယ်တွေလိုပါပဲ။
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း အထင်အရှားရှိကြတယ်။ ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်တယ်။ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက အဲ့ဒီကြယ် တွေဟာ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကြွေနေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမက ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။
နစ်ဆယ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သော်ရင် လူတိုင်းအတွက် မဖြေသာပဲ မမေ့ပျောက်သင့်တဲ့ ဖြစ်ပျက်တွေမို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်
Posted by LRDP at 8:18 AM 1 comments Links to this post
Day of Action on the International Day of Peace21st September 2009
18 September, 2009Committee for Asian Women (CAW)
Programme Officer: Suvechha Adhikari
Media Officer: Juliette Li
Women Workers: Survival amidst Conflict and Suppression
on the International Day of Peace, 21st September 2009
Democracy and peace are inseparable from women’s right to and at work. Peace is more than the absence of war. Twenty six years since the declaration of International Day of Peace, women in Asia continued to struggle among conflicts and political repressions. They make up the majority of war refugees and internally displaced persons. Religious fundamentalism deprives their rights to work. Women organisers and advocates are isolated, tortured or murdered under the name of War on Terror. The financial crisis has worsened the burden of women workers with rapid impoverishment and economic displacement, compelling them to seek employment elsewhere that render them vulnerable to abuse and exploitation. The most powerful protection for women’s rights at work – freedom of association – has also been suppressed with the excuse of financial loss of their employers. Gender based violence (GBV), particular sexual violence, is widespread, as women workers struggle with their loss of livelihood, loss of labour rights and shrinking political space.
In Bangladesh during the two years of state of emergency which was only lifted in 2008, union activities were suppressed which resulted in hundreds of workers killed and injured. The military junta in Burma continue to ban any form of independent trade unionism and considers the Federation of Trade Unions of Burma (FTUB) to be an illegal, terrorist organisation. Hundreds of trade union activists and members of their families are rotting in Burmese jails. Women workers’ and their unions have suffered in the conflict-affected countries as their workplaces are destroyed, unemployment soared, wages reduced, exploitation and social injustices are committed, migration and poverty increased.
Yet women are the first campaigners of peace and dignity. For decades, women have not only talked about peace but have been torch bearers seeking non-violent resolutions to conflicts amidstaworld of military and armed solutions. Commemorating this involvement of women in origination and promotion of peace through non-violence and strengthening of human rights and justice, the Committee for Asian Women (CAW) on the occasion of the International Day of Peace brings their contributions to light. On this International Day of Peace, Committee for Asian Women calls for the end to all forms of repression, the immediate and lasting resolution of conflicts in the region and the full and comprehensive participation of women in the pursuit of peace.
CAW is organisingaday of action on the 21st of September 2009 in front of the UN building to raising public attention to the livelihood and struggle of women workers living in conflict and suppression towards sustainable peace building.
Committee for Asian Women (CAW) isaregional network of 46 women workers groups in 14 Asian countries that aims to empower women work­ers to protect, advocate, and ad­vance their rights. CAW is part of the global movement advocating workers' rights for over 30 years.
Day of Action on the International Day of Peace
Women Workers’ in Asia:
Agents for Peace and Development
Date: 21st September 2009 (9am to 11am)
Place: In front of the UN building, Bangkok
Organisers: Committee for Asian Women, Thai Labour Campaign, Triumph International (Thailand) Labour Union
Participants: 100-150 Women workers and activists from civil organisations of Thailand, Burma, the Philippines, China and Pakistan
The global war against terror has createdanew dimension of unprecedented consequences resulting in further polarisation of societies and aggravating latent cleavages such as communalism, fundamentalism, and gender violence. Since the “war on terror” women have been rendered more vulnerable, in terms of economic and political discrimination, as well as increased violence.
Asia’s war on freedom and its armed ethnic conflicts wound women’s bodies and lives even when they are not recognized as casualties. A particular vulnerability is their inability to provide remedies for themselves and their families and the lack of political power to pursue peace. The complete collapse of economic activity render women workers bereft of the right to decent work and freedom of association.
A sharp escalation in migration and trafficking in women and children have been noted from areas of conflict and suppression. As of 2009, an estimated 35 million people worldwide have been displaced by conflict, and most of them are women. During their time away from their homes and communities, these women are subjected toahorrifying array of misfortune, including privations of every kind, sexual assaults and severe psychological trauma.
This public action aims at raising public attention to the livelihood and struggle of women workers living in conflict and suppression towards sustainable peace building.
9.00 to 9.30 gathering in front of the UN building
9.30 to 9.50 read out statement on International Day of Peace
9.50 to 10.20 solidarity message from groups
10.20 to 10.40 action: protect the freedom of association and freedom of speech
10.40 to 11.00 street drama: end violence against women
Posted by LRDP at 3:55 AM0comments Links to this post
မျက်မှောက်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံး ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရသော စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး စသည့် တနေ့ထက်တစ်နေ့ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည့် အထွေထွေအကျပ်အတည်းများ၊ ပြေလည်နိုင်စေရေး အတွက်ဆိုလျှင် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင် ပျက်သုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမှသာ ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ နှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင်ပျက်သုဉ်းပျောက်ကွယ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးတို့သည် မိမိတို့၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာလျက်ရှိသည့် အခွင့်အရေးများကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တော်လှန် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြမှသာလျှင် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု အလေးအနက် ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူထုလှုပ်ရှားမှု နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းသည်သာ စစ်အစိုးရပြုတ်ကျရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပျက်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားစေရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့မှ အပြည့်အ၀ယုံကြည်ထားပြီး လှုပ်ရှားမူများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နယ်စပ်ဒေသရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကွန်ယက်ကို စုစည်း တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက် အခြေခံကျ၍ ပြည်သူတစ်ဦးချင်း ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့များဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် GAB(Global Action For Burma)အင်အားစုကြီးနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းသွားစေရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်။
မိမိတို့ကွန်ယက်မှ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား ပြည်သူများ၊ တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် စစ်အုပ်စုမှအဓမ္မ ရွေးကောက်ပွဲအသစ် မပြုလုပ်နိုင်မှီ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းပြိုလဲသွားသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် မဟာမိတ်အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထု အားလုံးကို စုစည်းညီ ညွတ်စွာ
ပူးပေါင်း တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ခေါ် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ယခုအချိန်ကို တိုက်ပွဲဝင်အရှိန်မြှင့်တင်ရေး ကာလဟု သတ်မှတ်ပြီး လူထုတိုက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ကာ တိုက်ပွဲများကို ဖေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကွန်ယက်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာ လိုက်ပါသည် ။
ဆက်သွယ်ရန် -နိုင်ဥဿာ -0850527306
Posted by LRDP at 7:50 AM0comments Links to this post
လွှတ်မြောက်လာသော ပုဇွန်တောင်ပြည်သူ့ 
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်းနိုင်း နှင့်
မုံရွာအောင်ရှင် တို့ ကိုမြင်ရသည်မှာဝမ်းသာ
သို့ သော်မနေ့ တနေ့ ကမှထပ်ဖမ်းသူများ
အတွက်ရင်မအေးနိုင်ပါ ။မည်သို့ ပင်ဆိုစေ
စစ်အုပ်စု အမြတ် ထုတ်ခြင်းကို သတိထား
မိကြဖို့ လိုပါသည် ။
အပြစ်မဲ့ဖမ်းဆီးထားသူများအားနိုင်ငံတကာတွင် အမြတ်ထုတ်နိုင်ရန် လွှတ်ပြရသည်လွှတ်လိုက်သောသူများမှာ
ကျမ လိုပဲ အနှောင်အဖွဲ့ မကင်းသော၄၀၁ ပုဒ်မ နှင့် လွှတ်လိုက်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတစ်ပြားသားမှမတင်နိုင်
ပါ။စစ်အုပ်စု သည် ၄င်းတို့ အမြတ်မရပဲမလုပ် ယခုရလိုက်သော်အမြတ်သည် ပို၍ပင်ကြီးပါလိမ့်မည်။
အမှန်တကယ်စေတနာ စစ်မှန်ပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘဘဦးတင်ဦး ခွန်ထွန်းဦး ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုဌေး
ကြွယ်အပါအ၀င် ၈၈ ကျောင်းသားများ NLD လူငယ်များ ကျော်ကိုကို တို့ဗကသ မျိုးဆက်သစ်များ အားလုံး
သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးပါမှ စစ်အုပ်စု၏ သဘောထားအား အကောင်းဖက်အနည်းငယ်
ထဲ့သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ဤကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်လွှတ်နည်း မျိုး ၂၀၀၂တွင် မိမိကိုယ်တိုင်
ခံစားခဲ့ရသဖြင့် လွှတ်ပြီးသူများ၏ နောက်မှရှိနေသော နှောင်ကြိုးအား မိမိအနေနှင့် ကိုယ်ချင်းစာစိုးရိမ်မိပါ
သည် ။ မည်သို့ ပင် ဆိုစေကာမူ ယုံကြည်ချက်ကြီးမားသူ တို့သည် တဖြောင့်တည်းသာလျောက်လှမ်းကြ
1. Ma Eik Khaing Oo (Insein)
2. U Tin Mya (Insein)
3. Ko Nyi Nyi Min (Butheetaung)
4. Ko Kyaw Kyaw Thant (Insein)
5. Monywar Aung Shin (a) U Aye Kyu (Insein)
6. U Nine Nine (Insein)
7. Ma Tin Tin Myint (Insein)
8. Ma Than Than Htay (Insein)
9. Ma Than Than Sint (Mandalay)
10. Ma Thin Min Soe (Insein)
11. Ma Kyi Kyi Min (Insein)
12. Ko Zaw Htut Aung (Kale)
13. U Tin Myo Htut (a) Kyaw Oo (Insein)
14. U Win Myint (Insein)
15. U Kyaw Maung (Myintkyina)
16. U Nay Win (Myintkyina)
17. U Kyi Lin (Myintkyina)
18. U Soe Wai (a) Than Zaw (Myintkyina)
19. Shin Sandaw Batha (Insein)
20. Ko Aung Gyi (Insein)
21. Daw Mi Mi Sein (Insein)
22. U Win Htein (Kathar)
23. U Soe Han( Lashio)
24. U Bo Gyi (Pegu)
25. Daw Khin Khin Lay (Pegu)
26. U Pe Tin (Pegu)
27. U Tin Myint (
28. Daw Zin Mar Htwe (Moulmein)
29. Ko Moe Hlaing (Moulmein)
30. Ko Moe Lwin (Moulmein)
31. Ko Myo Min Lwin (Moulmein)
32. Ma Htay (a) San San Myint (Insein)
33. Ko Thet Oo (Taungoo)
34. U Pannita (a) Myint Aye (Taungoo)
35. Ko Zaw Tun (Taungoo)
36. Ko Bo Bo (Myingyan)
37. Ma Sanda (Myingyan)
38. Ko Pyait Phyo Aung (Pa-Ai)
39. Ko Wunna Soe (Pa-Ai)
40. U Ba Chit (Tharawaddy)
41. Ko Aye Min Min (Tharawaddy)
42. Ko Tin Tun (Tharawaddy)
43. Ko Shwe Thar (Tharawaddy)
18 .9. 2009 ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြသော NLD အဖွဲ့ ဝင်များစာရင်း
၁ ။ ကိုညီညီမင်း ( တောင်ဒဂုံ ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်
၂ ။ ကိုကြည်လင်း ( တောင်ဒဂုံ )
၃ ။ မအိမ့် ခိုင်ဦး ( ဂျာနယ်လစ် )
၄ ။ မသန်းသန်းဌေး ( မဌေး ) ကံမ အင်းစိန်
၅ ။ ဦးစောနိုင်းနိုင်း ( ပုဇွန်တောင် )
၆ ။ ဦးအောင်ရှင် ( မုံရွာ )
ရ ။ ဒေါ်ခင်ခင်လေး (ဘိုကလေး ) သာယာဝတီ
၈ ။ မတင်တင်မြင့် ( ကြည့်မြင်တိုင် )
၉ ။ ဦးတင်မြ (သင်္ကန်ကျွန်း ) အင်းစိန်
၁၀ ။ ကိုကျော်ကျော်သက် မြစ်ကြီးနားထောင်
၁၂ ။ သန်းဇော် ( ခ) ဖြိုးဝေ မြစ်ကြီးနားထောင်
၁၃ ။ ဦးနေ၀င်း ။
၁၄ ။ ဦးကျော်မောင် ။
၁၅ ။ မကြည်ကြည်မင်း
၁၆ ။ မသန်းသန်ဆင့်
၁၇ ။ မမိမိစိန်
၁၈ ။ ဦးတင်မြင့်
၁၉ ။ မသင်းမင်းစိုး
၂၀ ။ ဦးစိုးဟန်
၂၁ ။ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် ( မသေချာသေးပါ)
၂၂ ။ ကိုဝဏ္ဏစိုး ( ဘားအံထောင် )
၂၃ ။ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် ။
Posted by LRDP at 6:23 AM0comments Links to this post
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မ၀င်ရေးကပြဿနာလား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက ပြဿနာလား
၁၄.၉.၂၀၀၉ ထုတ် THE VOICE ဂျာနယ်ကိုဖတ်လိုက်ရသည်။Vol-5/ No-45 ဖြစ်သည်။ ယခုတလောမြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မ၀င်ရေးဆိုသည့် ပြဿနာများ သတင်း စာနယ်ဇင်း များတွင် အချိန်ပြည့် နေရာယူလျက်ရှိသည်ကိုသတိထားမိသည်။
ဦးသုဝေ၊ အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၊ကွယ်လွန်သူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၏သမီး၊ ဦးရွှေအုံး ကိုအေးလွင်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမား ဦးအုန်းလွင်၊ ဦးကြည်ဝင်း စသူတို့သည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အတူပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းလောကတွင်လည်း ဆရာမောင်စူးစမ်း၊ ကိုအောင်ထွဋ် စသူတို့သည်ရွေးကောက် ပွဲနှင့် ဆိုင်သည့် အမြင်များကို ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ရေးသားလာကြသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့မူ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊ မ၀င်ရေးဆိုသည်ကို ယနေ့ထက်တိုင်အောင်မဆုံးဖြတ်ရသေးဟုဆိုသည်။ သတင်းစာဆရာကြီး ဘဘဦးဝင်းတင်ကမူ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်မလိုလားအပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်အတွက် အချက်သုံးချက်ကို ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက် အဖြစ် ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားသည်။
(၂) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောအချက်များကိုဖယ်ရှားပေးရန်ပြင်ဆင်ပေးရန်
(၃) ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာလေ့လောစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များဖိတ်ခေါ်၍ ကျင်းပပေးရန်
အခြားအခြားသော တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကလည်း ၄င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အသီးသီးတောင်းဆိုနေကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုများကို ဆရာမောင်စူးစမ်းက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဈေးဆစ်မှုများဟုသုံးနှုန်းထား ပါသည်။ဆရာမောင်စူးစမ်း၏ သုံးသပ်ချက်အရ “၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အန္တိမရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ်ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲမည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကို နိုင်ငံရေးပါတီးတို့က အစော ကြီးကတည်းက ချမှတ်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့ဆုံးဖြတ် ရန်လိုအပ်ပုံကိုကြိုတင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲမှတစ်ပါး အခြားရွေးစရာမရှိ ကိုကြိုတင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ယခုလည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှတပါး အခြားရွေးစရာလမ်းမရှိပြီ။စင်စစ်နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးဤအတိုင်းဆုံးဖြတ် ထားပြီးဖြစ်ဟန်ရှိသည်။အချိန်စောင့်နေကြသည်။ သိစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေမသိစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်လမ်းကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ကြသည်။” ဆရာမောင်စူးစမ်းက ထိုအတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်ထားပါသည်။
ယနေ့ကာလသည် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန်မှတပါး အခြားရွေးစရာလမ်းမရှိတော့သည့် အခြေအနေသို့ဆိုက်ရောက်နေသည်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို သုံးသပ်စဉ်းစားရန်လိုအပ်လာပေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် သတင်းစာဆရာကြီး ဘဘဦးဝင်းတင်ပြောသည့်အတိုင်း မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် မလိုအပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဆိုသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သလားဆိုသည်ကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရန်လိုအပ်လာပေသည်။
ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်ပြဿနာများရှိနေသည်။ပြည်သူလူထုသည်ယင်း ပြဿနာ၏ဒဏ်ကိုခါးစည်းခံနေကြရသည်မှာ မည်သူမှအငြင်းမပွားကြချေ။ ယနေ့ကာလကို နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ရှေ့မတိုးသာ၊ နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေသည့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည်။ ဆရာမောင်စူးစမ်းကတော့ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေအဖြစ် ဖေါ်ပြသည်။ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲက ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပေးမည် ဟု ဆရာမောင်စူးစမ်းကသုံးသပ်ပါသည်။
ရှေ့မတိုးသာနောက်ဆုတ်သာအခြေအနေဟုဆိုဆို၊ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ အနေအထားလို့ပဲပြောပြော တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်ကိုသာမည်သူမဆိုမျှော်လင့်တောင့်တကြရမည်ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးအတွက်ကိုသာလုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူလူထု အကျိုးဖြစ်ထွန်း မှုကိုဦးတည်မှသာလျှင် ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအနေအထားမှ ပြောင်းလဲမှုဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ထို့အတူကိုအောင်ထွဋ်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော သူ၏ အမြင်ကို “လွှတ်တော်များပေါ်မှနိုင်ငံရေး” ဆိုသည့်ဆောင်းပါးတွင် “အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ဥပဒေပြုရေးအာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာဟူ၍အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရပ်ရှိသည့်အနက်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမြင်ကွင်း ၌အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပေါ်ထွက်လာသောနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့်နေရာမှာဥပဒေပြုအာဏာကျင့်သုံးသည့်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ခုလောလောဆယ်လူအများစု၏ စိတ်ဝင်စားမှုသည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့် မ၀င်သင့်ကိစ္စသာဖြစ်နေသောကြောင့် လွှတ်တော်များပေါ်တွင် ဖြစ်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုနဲနေသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။ သို့သော်မကြာမီ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပေါ်ထွက်လာသောအခါတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမ၀င်ရေးကိစ္စ သူ့အလိုလို ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့မည်ဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီအဟောင်းအသစ်အားလုံးမှတ်ပုံတင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဟူသောသဘောတရား (၄/၈၈ ဥပဒေနည်းတူ)ပါဝင်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မ၀င် ကိစ္စသည် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကြရမည့်ပါတီများအတွက် စဉ်းစားစရာမလိုသောကိစ္စဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါတွင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရေးကိစ္စနှင့် ထမ်းဆောင်ပေးရမည့်တာဝန်များက ပို၍အရေးကြီးလာတော့မည် ဖြစ်သည်။” ဟုရေးသားထားသည်။
မက်လုံးပေးသောရေးသားချက်များဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကို သွယ်ဝိုက်ရေးသားထားခြင်းဖြစ် သည်မှာစာရေးပါးမ၀သည့်သူတို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့်အတိုင်းဗူးပေါ်သလိုပေါ်တတ်လေသည်။ ပြည်သူ့အကျိုးကိုအမှန်တကယ်မလိုလားဘဲ စာရေးစားသူတို့သတိထားအပ်ပါသည်။
သတင်းစာဆရာကြီးဘဘ ဦးဝင်းတင်၏ ဆောင်းပါးနိဂုံးပိုင်းတွင်လောလောဆယ်မှာတော့ကျနော်တို့ ခံယူချက်အပေါ်ဘယ်လိုမှတွေဝေသံသယစိတ်တွေမပွါးကြပါနဲ့အဖွဲ့ ချုပ်ဟာ ဗမာပြည်သူလူထုကြီး တိုက်ပွဲဝင်
ရယူနေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို အဓမ္မလုယူမဲ့ ၊ ရှင်လမ်းမရှိအောင်ချို့ ယွင်းပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စဉ်ထဲမှာသွေး
ကြောင်တွေဝေစွာ နဲ့မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်တို့ ဟာ ထိတွေ ဆက်ဆံဖို့ အမြဲအသင့်ရှိနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ အသက်သွေချွေးတွေ ဘ၀တွေအများကြီး စွန့် လွှတ်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေ ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွဲဖို့ ဆိုရင်တော့ အသင့်ရှိတာထက်တောင်ပိုပါ။။
ပြည်သူ့အကျိုးလိုလားသောနိုင်ငံရေးသမားကောင်းပီသစွာ၊ ခံယူချက်နှင့်ယုံကြည်ချက်တို့ကို ပွင့်လင်း ရိုးရှင်းစွာ သတ္တိရှိစွာရေးသားတင်ပြထားသည်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအလုပ်ဟူသည် မျိုးစေ့မှန်မှ အပင်သန်စွမ်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တို့မရှိဘဲနိုင်ငံအကျိုးကိုမည်သို့မှ သယ်ပိုးထမ်းဆောင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်၌ အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာ သမိုင်းပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ် သည်။
ဆရာမောင်စူးစမ်း ၏ ဆောင်းပါးသည်တွေးတောစရာပေါင်းမြောက်များစွာ၊ ပြဿနာပေါင်းမြောက် များစွာကို စာဖတ်သူတို့ ခေါင်းထဲထည့်ပေးသွားပါသည်။
“မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် မဏ္ဍိုင်နှစ်ပါးရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြမည်။ ယင်းမဏ္ဍိုင်နှစ်ပါးအနက် စစ်ဘက်မဏ္ဍိုင်က ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမည်။ စစ်ဘက်ကလည်း စပွန်စာ သို့မဟုတ် ကြိုးကိုင်အနေဖြင့် မိမိတို့ပလေယာတို့ကိုတန်းစီရမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တန်းစီရမည်။ဤမဏ္ဍိုင်နှစ်ပါးအနက် စစ်ဘက်မဏ္ဍိုင်က အဖြစ်အပျက်တို့ကိုပိုပြီး ပုံလောင်းစရာရှိလာသဖြင့် စစ်ဘက်၏ တန်းစီဇယားချပုံ၊ ဂိမ်းအစီအစဉ်တို့သည် နိုင်ငံရေးသုံးသပ် သူတို့အဖို့ပို၍ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းမည်” ဟုဆိုပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပသေည် စစ်ဘက်အဏာရရေး ဦးတည်ရေးဆွဲထားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးပညာရှင်အသီးသီးက ထောက်ပြဝေဖန်နေကြသည်။ အဓိကအားဖြင့် အခြေခံမှာ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်၏ ဥပဒေပြုရေး အုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင် ပါဝင်ခွင့် ပြုရေး မပြုရေးအပေါ်များတွင်သာ စဉ်းစားသုံးသပ်နေကြသည်။
ဆရာမောင်စူးစမ်း၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်လိုက်သောအခါတွင်မှ ထို့ထက်ပိုမိုသောအသိတရားကိုရလိုက် ပေသည်။ စစ်ဘက်၏ တန်းစီဇယားချပုံနှင့် ဂိမ်းအစီအစဉ် များအကြောင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းစစ်ဗိုလ် အချင်းချင်း အာဏာလုကြမည့် စစ်တပ်အကွဲအပြဲများအကြောင်းဆက်စပ်တွေးလိုက်မိသည်။
တိုင်းပြည် နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် မိအေးဆယ်ခါနာဖြစ်ကြရမည့် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှားစဉ်းစားမြင်ယောင်လာမိပါတော့သည်။ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသောတိုင်း ပြည်တွင် ပါးနပ်လိမ်မာစွာဖြင့် အသိတရားများပေးထားသော ဆရာမောင်စူးစမ်းကို သတိကြီးစွာထား၍ ကျေးဇူးတင် လိုက်မိပါတော့သည်။
Posted by LRDP at 5:34 AM 1 comments Links to this post
Posted by LRDP at 6:10 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:40 AM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အပေါ် မတရား ပိတ်ပင်ထားမှု အား ပြောင်းလည်းပေးရန်
ပုဂ္ဂိုလ်ထုးဆရာတော် ရှင်ဥတ္တမ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
လာမည့် စက်တင်ဘာ (၉) ရက်နေ့ သည် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ နေ့ အဖြစ် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ဂုဏ်ပြု သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သော ဆရာတော် ၏ မြန်မာပြည်သူတင်မက အာရှ တစ်ဝှမ်းအားနိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့ပုံ နှင့် ဆရာတော်၏ကြိုးပမ်းခဲ့မှုအားဂုဏ်ပြု
ပုဂ္ဂိုလ်ထုးဆရာတော်ရှင်ဥတ္တမ သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေ မြို့၊ ရူပ ရပ် အဖ ဦးမြ ၊ အမိဒေါ် အောင်ကျော်သူ
တို့မှ ၁၈၇၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၊ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် ဖွားမြင် ခဲ့သည် ။ မွေးချင်သုံးဦး ဖြစ်သော -
၁ ။ ပေါ်ထွန်းအောင်
၂ ။ ကျော်ထွန်းအောင်
၃ ။ မအိမ်စိုး …….တို့ အနက် အကြီးဆုံး ပေါ်ထွန်းအောင် မှာနောင် အခါ ဦးဥတ္တမ ဖြင်လာသည် ။
ညီအကိုနှစ်ဦး မှာ ၉ နှစ် အရွယ်နှင့်၆ နှစ် အရွယ်သို့ ရောက် ကြသော အခါ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားလို ၍ မိဘ များအား ပူစာရာမရသဖြင့်အိမ်မှထွက်ပြေး ခဲ့သည် ။ ၁၅ ရက်ခန့်အကြာတွင် မှ သစ်ပင်တပင်အောက် တွင် ညီအကို နှစ်ဦးအား မိဘ များမှ ပြန်တွေ့ ခဲ့ ကြသည် ။
ထိုနောက်မိဘများမှ ကလေး နှစ်ယောက် ၏ ဆန္ဒအား ပြည့် ဝ စေရန်အတွက်စစ်တွေ မြို့ ရှိအင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာ သင်သောကျောင်းသို့အပ်နှံ ခဲ့ ရ သည် ။ ကျောင်းအပ်နှံ ရာတွင် အကြီး ဖြစ်သူပေါ်ထွန်းအောင် မှာ သူငယ်တန်း မှစတက် ရသည် ကိုမကြေနပ်ပဲကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးအား သုံးတန်းမှစတက် ခွင့်ပြု ပါရန်
ရဲ ၀ံ စွာဖြင့်ပြောလေ ရာ ဆရာကြီး မှ သုံးတန်း တွင်သင်ကြားသော အင်္ဂလိပ် စာတို့ကို ဖတ် ခိုင်းရာ တွင် အထစ်အငေါ့မရှိဖတ် ပြနိုင်ခဲ့ သဖြင့်ဆရာကြီး မှ နှစိတန်း မှ စတက် ခွင့်ပြု ခဲ့ ရ သည် ။ ( ကျောင်းမနေ ရသေးပဲဖတ် ပြနိုင် ခြင်းမှာ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း တက်သော သူငယ်ချင်း များထံ မှ ကြို တင်သင် ကြားထားခြင်း ဖြစ်သည် ဟုနောင် အခါ မှမိဘ များသိခဲ့ ရ သည် ။ )
ကျောင်းတက်၍ ၂ နှစ်အကြာ ၅တန်းသို့ အရောက်တွင်အတန်းတင် စာမေး ပွဲ တွင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရခိုင်တိုင်း
မင်းကြီးကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့် သောဒုတိယ ဆုရသည် ကို ဆုယူပြီးပြီးခြင်းမှာ ပင် ညီငယ် အား စစ်တွေကမ်းနား
သို့ ခေါ်သွားပြီး ဆိပ်ကမ်းအရောက်တွင် “ ‘ ဒီမှာငါ့ ညီ ဆုယူရင် ပထမ ဆုက လွဲ ရင် ဒုတိယ ၊ တတိယ ဆို ဘယ်တော့ မှ မယူဘူး “ ဟုဆိုကာ ရရှိခဲ့ သောဆုအား ချိုးဖဲ့ ဆုတ်ဖြဲ ပစ်ခဲ့ လေ သည် ။
ထိုနှစ်မှာပင်၎င်းတို့ညီအကိုနှစ်ဦးအား မိဘများ ထံ မှ ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီးတပါး မှာမွေးစားခွင့် တောင်း
ပြီး ကလကတ္တား တွင် ကျောင်း ထားမည့် ကြောင်း ပြောဆိုလာရာတွင်မိဘများမှခွင့် မပြု ခဲ့သဖြင့်နိုင်ငံခြား
တွင် ပညာသင်ကြားရ မည့် အခွင့် ရေးတို့ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရ သည် ။ ၁၃ နှစ်သားအရွယ်တွင် ပေါ်ထွန်းအောင် မှာ နိုင်ငံ ခြားတွင် ပညာ သင် ယူလို စိတ် ပြင်းပြလာပြီးငွေ ရှိလျှင် ဖြစ် နိုင်သည် ဟု ယူဆကာဦးလေးတော်သူ
ထံ ကူညီ လုပ်ကိုင်ရင်းငွေ စုခဲ့ သည် ။ သို့ သော် ဆန္ဒ ရှိသည့် အတိုင်း ဖြစ်မလာသောအခါတွင် မိဘ များထံ သို့ မပြန်တော့ပဲ စစ်တွေ မြို့ ရှိရွှေစေတီကျောင်း ဆရာတော် ထံ သို့သွားရောက် ကာ ပရိယတ္တိ စာပေ တို့သင်ကြားပေးပါရန် လျှောက် ထားရာ ရဲရင့် တက်ကြွသော စိတ်ဓါတ် ကိုသဘောကြ သဖြင့်ဆရာတော်မှ ဖိုးသူတော် အဖြစ် ၀တ်ခွင့်ပြု လိုက် သည် ။
ဖိုးသူတော် အဖြစ် နှင့်၂ နှစ် ခန့်ပရိယတ္တိ စာပေတို့ သင်ကြားပြီးသောခါ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် တွင် ညီ ငယ် ကိုပါခေါ်ဆောင် ပြီး သာမနေ ၀တ်ခဲ့ ကြသည် ။ ပေါ်ထွန်းအောင် မှ ရှင်ဥတ္တမ ၊ ကျော် ထွန်းအောင် မှာ ရှင် အရိယ ဖြစ်လာ သည် ။ထို့နောက် ရှင် ဥတ္တမ သည် ပရိယတ္တိ သင် ကြားရာတွင် ထင် ရှားသော ပခုက္ကူ သို့သွားရောက်လိုသောဆန္ဒ ပြင်းပြလာသဖြင့် လူဝတ်လဲပြန်ကာ ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာနှုင့် အတူ စစ်တွေ မြို့မှ ထွက် ခွာလာ ရာ တောင် ငူ မြို့သို့ အရောက် တွင် စာပြန်ပွဲ နှင့် ကြုံ ကြိုက် လေ သဖြင့်ဝင်ေ၇ာက် ဖြေ ဆိုရာပထမ အဆင့်ရရှိခဲ့ လေ သည် ။
ပထမဆုရသည်အတွက်လူသိ များလာပြီး တောင်ငူမြို့ ၊ ကျွန်းကုန်း ရပ် ရှိ ရှမ်းအမျိုးသမီးတဦးမှ ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာ အား ပေါ်ထွန်းအောင် ကိုမွေးစား ခွင့် ပြုပါရန် လျှောက်ထားရာ ဆရာတော် မှ ပေါ်ထွန်းအောင်၏ သဘောကို မေးမြန်းလေ သည် ။ ထိုအခါမိမိ အား မွေးစာ လိုပါက ကာလကတ္တား သို့ပညာ သင် စေလွတ် ရမည် ဟု ဆို ရာ ရှမ်းအမျိုး သမီး မှ လဲ သဘောတူသဖြင့်ခေါ်ယူမွေးစား ပြီး ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင် နိုင်ငံ ခြား
သို့ပညာသင် သွားရ လေတော့ သည် ။
၁၉ - နှစ်သား အရွယ်တွင်ကာလကတ္တား မှ ၁၀ တန်းအောင် မြင် ပြီး မြန်မာပြည် သို့ပြန်လာကာသာမဏေ ပြန်ဝတ်သည် ။ ထို့ နောက်ပခုက္ကူ သို့ကြွရောက် ပြီးပရိယတ္တိ စာပေ တို့ ကို သင် ကြားပြန်သည် ။အသက် ၂၀ အရွယ်တွင် စစ်တွေ မြို့ဘုံဘေဘားမား ကိုယ်စား လှယ် ဖြစ် သူ ဦးထွန်းအောင်ကျော် မှ ဒကာခံယူပြီး ရဟန်းဘောင် သို့ တက်ရောက်ခဲ့ သည် ။
ရဟန်း ဖြစ်ပြီး အခါတွင် အန္ဒိယသို့ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် ကြွ ချီ ပြီး ဒေသန္တရ ဗဟုသု တနှင့်သက္ကတ ၊ ဘင်္ဂလီ ၊ နာဂလီ စသော ရှေးဟောင်း စာပေ များ ကို့အထူးလိုက် စား ပြန် သည် ။ အန္ဒိယ ပြည် ၌ ရှိ စဉ် အမျိုးသားကောလိပ်ကြီးတခုတွင် ပါဠိ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရပ် များကို ပို့ချ ပေးရသော“ပါဠိပရော်ဖက်ဆာ “အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ ပြန်သည် ။ ထိုကာလ အတွင်းအန္ဒိယ ပြည်သူတို့၏ ကြည် ညို ခြင်း ကို အထူးခံ ခဲ့ 
ရပြီး အိန္ဒိယ ရှိ အကျော် အမော် များနှင့်ယှဉ် ပြိုင် ပြီး ဟိန္ဒူမဟာ ဆမ္မ အသင်းကြီးတွင် ဥက္ကဌ ရာထူး ရခဲ့သည် ။ အန္ဒိယ တွင် (၈) နှစ်ကြာ ပြီးနောက် ပြင်သစ် သို့ ပညာသင်ကြားရန် ထွက် ခွာသွားပြန်သည် ။
ပညာသင်ကြားနေ စဉ် ( ၁၉၀၅ -ခုနစ် ) ၀န်းကျင်၌ ရုရုား နှင့်ဂျပန် စစ်ဖြစ် ပွားရာတွင် နိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်
သော ဂျပန်နိုင်ငံမှအနိုင် ရရှိခဲ့သဖြင့် သွားရောက်လိုသောဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သ ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် ကြွရောက် ခါ ၁၉၀၇ -ခုနစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၄ ) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှ စင်္ကာပူသို့ကြွ လေတော့ သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင်စင်္ကာပူမှတဆင့် ဂျပန်သို့ကြွရောက်လေရာ မတ်လ ၇- ရက်နေ့ တွင်ဂျပန်
ပြည် ယိုကိုဟားဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ လေ သည်။ ဂျပန်ပြည် ၌ ၅- နှစ်ကြာမျှ ပရ်ာဖက်ဆာအဖြစ်နေထိုင်
ခဲ့ စဉ် တရုတ်ပြည်မှတိမ်းရှောင်လာသောဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့် သိကျွမ်းခဲ့ သလိုတရုတ်ပြည်အတွက်
လဲ အကြံ ညဏ် တို့ပေးနိုင် ခဲ့ သည် ။
ထိုမှတဖန် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ကြွချီရာတွင်အင်ဒိုချိုင်းနား ရှိ ဆေ ဂုံ( ဟိုချီမင်း ) မြို့ သိုအရောက်တွင်
မင်ကွန်းမင်းသားကြီး၏ ဖိတ်ကြား ချက်အရ ဆွမ်းစာကြွရောက် ပြီး မြန်မာပြည် အရေး ဆွေးနွေး ခဲ့ ရာတွင်
ဆရာတော် မှ အရေးမလှကြောင်းပြော ပြ သဖြင့်မင်းသားကြီးခမျာမျိုးချစ်စိတ် ကြောင့် မျက်ရည်ကျ ခဲ့ရှာ သည် ။
၁၉၁၀ -ခုနှစ်လောက်တွင် မြန်မာပြည် သို့ ပြန်လည် ရောက် ရှိလာသော အခါတွင် ဘာသာစကားပေါင်း ( ၉ ) မျိုး ခန် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာတော် အား ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းသားများနှင့် အတူ ပြည်သူများက လေးစား
ကြည်ညိုကြသည် ။့ထိုအခါတွင်ဆရာတော် မှာ ပြည်တွင်းသို့ လှည့် လှည် ကာ နိုင်ငံရေးတရားတ်ို့ စတင်ဟော
ပြောစ ပြုလာသည် ။ ၁၉၁၂- နှစ် တွင် နှမ ဖြစ်သူ ဒေါ် အိမ်စိုး နှင့် အတူ မြန်မာလူငယ် ( ၃၁ ) ယောက် အား ဂျပန် နိုင်ငံ ပညာသင်ကြားစေရန် အတွက် ထွက်ခွာလာခဲ့ပြန် သည် ။ ၁၉၁၉ -ခုနှစ်တွင် ဂျပန်မှ ပြန်ကြွလာ ပြီး သူရိယ သတင်းစာတိုက်တွင်သီတင်းသုံးကာသတင်းစာ မှနေ၍ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါများ ရေးသား ခဲ့သည် ။
Posted by LRDP at 10:25 AM2comments Links to this post
ကျမ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ကဗျာကို ပြန်လည်တွေ့ ရှိပြီး ကျားရဲ တစ်ကောင်ရဲ့အသွင်ကိုထင်ဟပ်မိအောင်ရေးသား
ထားတဲ့ ဘဘရဲ့ကလောင်ထက်မြတ်မှုကိုအင်မတန်မှလေးစား လို့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ဘဘရဲ့ထောင်
ထဲကသရုပ်တွေဘ၀တွေပုံဖော်ထားတာထိမိလှသလို ဒီထက်မကကြမ်းတမ်းမှုတွေလည်း ဘဘရင်ဆိုင်ခဲ့ရ
မှာအသေအချာပါ။အဲဒီ့မှာကျမ ရဲ့ထောင်ထဲဖြစ်စဉ်ထဲကတစ်ခါမှမရေးဖြစ်တဲ့အချို့ အချက်တွေ ခေါင်း ထဲ
၀င်လာပြီး ပြုံးလည်းပြုံးမိ သတိတရလည်းရှိတာကြောင့် ဘလော့ရောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပါဦးမယ် ။
ဒီလိုပါ ထောင်ထဲမှာ အရင်ရောက်နှင့်သူ ကျနှင့်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေ ကနောက်မှရောက်လာသူတွေ
ကိုတွေ့ ဖူးသည်ဖြစ်စေမတွေ့ ဖူးသည်ဖြစ်စေ သိသိ မသိသိ ရှိတာလေးတွေမျှကျွေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ
လေးတွေ ရယ် ကျွေးချင်ပေးချင်ရင်ဖြင့်တောင် အန္တယယ်ကြားက ၀ါဒါတွေ(တစ်ချို့ ) ရဲ့မိုက်ရိုင်းမှုတွေကြား
ကခိုးကျွေးကြရပါတယ် ။ အချုပ်တို့ စစ်ကြောရေးကာလ တို့ ဆိုတာပိုလို့ ကို ကြပ်တည်းပါတယ်။ကျမဆိုစစ်
ကြောရေးကာလ တစ်လလုံး ကျမ ကို ခိုးကြောင်းခိုးဝှက်ကျွေးခဲ့ရတဲ့ ထောင်ကျနှင့်ပြီးသား အမတွေရဲ့ကျမ
ကိုကြွေးခဲ့ရပုံ ကိုမမေ့ပါဘူး တိုက်ပိတ်ခန်း လို့ ခေါ်တဲ့ သီးသန့် တိုက်ခန်းလေး တွေရဲ့ တံခါးနဲ့ အောက်က
သံမံတလင်းဆို အစားအစာတွေ ခိုးပြီး ထိုးထဲ့ပေးရလွန်းလို့ဂျိုင့် ကလေးတွေတောင်ဖြစ်လို့ ရယ်ပါ။
ဘာစားစရာပဲဖြစ်ဖြစ် မြေပဲလေး တစ်လုံးစာလောက်လွတ်နေတဲ့ တံခါးရွက်ကြီးအောက်ခြေနဲ့ သံမံတလင်း
အကြမ်းစား ကြား ကို အစားလေးတွေ ဖြန့်ထဲ့ရတာပါ ။ဒါလည်းအင်မတန် လစ်မှ ပေးလို့ ရပါတယ် ။
တစ်ခါတစ်ခါ ငိုအား ကြောက်အားထက်ရီအားသန်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် ။ ကျမ ကအအိပ်ပုတ်ဆိုတော့
အထဲမှာအိပ်ပျော်လို့အလှည့်ကျ ၁၅ မိနစ် ရေချိုး ထွက်ရတဲ့အမ တွေက သူတို့ ထွက်ရချိန်လေးမှာဝန်ထမ်း
အလစ် ကျမ ကို စားစရာလေးတွေ တံခါးမကြီး လွတ်နေတဲ့ မြေပဲတစ်ထောက်စာလေးကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ
ထဲ့သွင်းသွားခဲ့ပေမဲ့ ကျမမနိုးလေတော့ မယူမိတဲ့အခါ လာကျွေးသူတွေ မှာ အလွန်နှလုံးရောဂါဖြစ်ရရင်ခုန်ရ
တဲ့အခြေအနေပါ။ အကယ်၍များ ကျမ တံခါးကိုဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကလာဖွင့်လိုက်ရင် ပေးတဲ့သူကိုပြစ်ဒဏ်
တစ်ခါများဆို ကျမကိုထောင်မချခင် တလာစီတယ် လို့ထောင်အခေါ် ထောင်တွင်းရှာဖွေရေး လုပ်တဲ့နေ့ 
နဲ့ ကြုံတွေ့ ရပါတယ် ။ ကျမ က အချုပ် စစ်ဆေးဆဲဆိုတော့ ထောင်ပုံစံကလွဲလို့စားစရာအပိုမရှိ ရတာ ကို
ထောင်မှုးတွေ ၀ါဒါတွေ သိပြီးသားပါ ။ဒါပေမဲ့ တခြားအခန်းတွေ မှာ ၀ုန်းဒိုင်းသံကြားတော့ ကျမ သံသယဖြစ်
တာနဲ့မမြင်ရပဲ နားစွင့်လို့ ရတဲ့ သံဇကာ ပေါက်လေးကနေ နားစွင့်တော့ ၁၉၈၉ ပထမအကြိမ်အတွေ့ အကြုံ
အရ ကျမ ကို အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ အမတော် ညီမတော် များ အခန်းထဲ ခိုးပြီး ထဲ့သွင်းပေးထားတဲ့မြေပဲတွေ
ကုန်အောင်ဝါးပြစ်ရတော့တာပါပဲ ကိုယ့်အခန်းကိုရှာမဲ့ အချိန် ကကပ်လာလေ ရင်ခုန်စိုးရိမ်ပြီး မြေပဲ လက်နှစ်
ဆုတ်စာလောက်ကိုစက္ကန့် ပိုင်းနဲ့ ဝါးပြီးအဖုံးမပါပဲသူတို့ ပေးထားတဲ့ လက်လည်းဆေး သောက်လည်းသောက်
အညစ်အကြေးလည်းဆေးရတဲ့ အိုးတစ်လုံးထဲကရေတွေနဲ့ အဲဒီ့မြေပဲကိုမျောချလိုက်ရတာလေကျမတစ်သက်
ဆိုးလိုက်တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုပါပဲ ။ နင်က ခိုးကျွေးတဲ့မြေပဲဆံတွေ ဘာလို့ ပေးထဲကကုန်အောင်မစားတာလဲမေး
ရင် မြေပဲ က ပုံစံငပိထက်စာရင် မြေပဲ တခြမ်း ထမင်းတစ်လုပ်တော့ စားဝင်သေးတာကြောင့်ရယ်ပါ။
အကယ်၍များ ကျမ ဆီမှာ စားစရာအစအန တွေ့ ခဲ့ရင် အဲဒီ့တိုက်တန်း(သီးသန့် ) ထဲကထောင်ကျပြီးသား
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေ မသက်သာဘူးမှတ်ပါ အနည်းဆုံးအဆင့် လျော့ရက်ဖျက်တာခံရမှာသေချာပါတယ်။
၁၉၉၇ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ လည်းရောက်ရောကျမ အမိန့် (၇) နှစ်ကျတော့ စောစောက ကျမကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်
ကျွေးခဲ့ပေးခဲ့သူတွေ ရဲ့ ဘ၀ ကျမလည်း ရာထူးရသွားတာပေါ့-- ထောင်ထဲမှာ တိုက်ပိတ်ထားတာ ကိုယ့် အ
ခန်း နဲ့ ကိုယ် အပြင်မထွက်ခဲ့ရပဲ အစားအစာမျှကြွေးခဲ့တဲ့ ပုံ ကဒီလို ပါ ။
ကျမ က အခန်း(၆) မနှင်းနှင်းဖွေး ကအခန်း(၇) မမာမာဦး(လက်ရှိထောင်ထပ်ကျနေသူ)က အခန်း(၈) မှာ
ထောင်ကျပြီးသူက ကျမ ကျန်နှစ်ယောက်က အချုပ် ပေါ့ ။။ ကျမ ဘယ်လိုသူတို့ ကို ကျွေးရပါ့လို့တွေးလိုက်
အခန်းထဲ ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန်လျောက်ရင်း အမိုးပေါ်မော့ကြည့်တော့ ၀မ်းသာသွားပါတယ် ။ တခန်းနဲ့ တ
ခန်း အမိုး နဲံ ကပ်ရပ် အကာအုပ်နံရံကြားမှာ သံဗန်း အကာ လေးထောင့်ကွက်လေးတွေ ရှိတာပဲကိုး-----
တစ်တောင် လောက်ရှိတဲ့ သံဗန်းပေါ့ သံဇကာအပေါက်လေးတွေက လက်သုံးလုံး အရွယ်လေးထောင့်ကွက်
လေ ဒီတော့ ဘယ်ရမလဲ ထောင်ထဲကအကြံအဖိုးတန် ဆိုသလိုပဲ အိမ်ကပါဆယ်ပို့ ထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိပ်
ကို လက်နှစ်ဝါးစာလောက် ဖြဲ ငါးပိကျော် အမဲကျော်(တစ်တုံးစာလောက်သာအပေါက်ကဆံ့သည်) စသဖြင့်
စားဖွယ်အရာရာကို ထုတ်ပြီး မိုးပေါ်မော့ တစ်ဖက်အခန်းဆီ ပစ်သွင်းတော့တာပါပဲ ။ ဆယ်ခေါက်ပစ်ရင်
၅ခေါက်လောက်တော့ မနှင်းရဲ့အခန်း (၇) ကိုရောက်ပါတယ် ကျန် ငါးခေါက်ကတော့ သံတန်းလေးတွေကို
သွားသွားထိပြီး ပြန်ကန် ကျလာတာပါ ။အဲဒီ့ မှာဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခါတစ်ရံဆုံးရှုံးနစ်နာရမှုကတော့သိပ်ကို
နှမျောစရာပါပဲ ။ ဘာလဲဆို မိလ္လာအိုး (ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့် တဲ့) ထဲကို ပြန်ကန် ပြီကျသွားရင်တော့ ဆုံးရှုံး
ရပြီပဲပေါ့။ ထောင်ကျ ထက် စစ်ကြောရေးကာလ အချုပ် ဆို ငါးပိကျော်ကွမ်းသီးလုံးလောက်က ရွှေ ပဲလို့ 
ပြောလို့ ရပါတယ် ။အခန်း(၇) ကနေ မနှင်းကလည်း အခန်း၇ှစ် က မမာမာဦးကို ကျမ ပစ်ပေးသလို့ တဆင့်
လက်ဆင့်ကမ်း ပစ်နေပါတယ် --ပျော်စရာကော မကောင်းဘူးလား တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပျော်ရ ရီရမောရ ရန်ဖြစ်
ရနဲ့ပေါ့ --တစ်ခါတစ်ခါ ကျမ က သီချင်းနောက်ပြောင် ဆိုပါတယ် --စာသားလေး က ကြိုးစားကြပါ
နောင်တခေတ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ ခုတော့ထောင်ထဲနေရမှာ ---
လို့ ဆိုလိုက်ရင် တစ်ဖက်ခန်း က မနှင်းကလည်း ဟုတ်တာပေါ့ --
ဆိုပြီး သံစဉ် နဲ့ အတူ နဘေ ထပ်နောက်ပြောင်ပြီး ဆိုလိုက်တာဖြင့် ခု ပိုပြီးအမှတ်ရနေမိပါတော့တယ် ။
Posted by LRDP at 11:11 AM0comments Links to this post
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန် အိုက်လိုအိုက်
ကာလယန္တယား တို့ ဘက်မှာ၇ှိတယ်
သိကြရဲ့လား ဟား ဟား ဟား ဟား
လှောင်အိမ်ထဲမှာတလွန့် လွန့် နဲ့ 
ငါလည်း အဲဒီ့လိုပဲကွ ဟေ့။ ။
Posted by LRDP at 11:55 AM4comments Links to this post